ALASKAN HUSKY VS. SIBERIAN HUSKY - ALIKA
Alaskan Husky (ankavia), Husky Siberia (ankavanana) dia samy mankafy mazoto misintona sy misintona ny tompony amin'ny ski ry zareo.
laboratoara mainty chesapeake bay retriever mix
Ilay Alaskan Husky vita hybrid tsy voasoratra dia aleony amin'ny hazakazaka alika alika. Ampiasaina indrindra amin'ny tanjona miasa izy io, tsy toy ny Siberian Husky izay ampiasaina amin'ny tanjona fampisehoana sy asa. Ny Huskies Alaska dia ampiakarina tsara mba hamokarana ireo alika miasa tsara indrindra araka izay tratra. Ny fiompiana Alaskan Husky dia fiompiana nomanina ary nolovana ara-teknika, na izany aza dia tsy madio izy ireo ary tsy voasoratra amin'ny AKC na CKC satria indraindray dia miampita miaraka amin'ny karazany avaratra sy tsy avaratra mba hamokarana ireo alika miasa tsara indrindra azo atao. Ny Alaskan Husky dia tsy mitovy amin'ny Siberian Husky, izay alika tsy madio izay voasoratra anarana amin'ny AKC sy ny CKC ary ampiasaina ho alika fampisehoana ary koa alika miasa.
Amin'ny hazakazaka mitarika sled, ny Huskies Alaskan dia matetika ampiasaina amin'ny hazakazaka lavitra kokoa ary ny Huskies Siberia dia matetika ampiasaina amin'ny hazakazaka lavitra kokoa. Ny alika sely dia fantatra fa mandeha an-tongotra 100 kilaometatra ao anatin'ny 24 ora.
Fahendrena ny bika aman'endriny, Huskies Alaska matetika mazavava kokoa amin'ny fananganana noho ny Siberianina miaraka amina fehiloha miharihary kokoa. Matetika ny siberianina dia manana manga na mitambatra amin'ny maso manga sy volontsôkôlà, fa ny masoaskanes Huskies matetika manana maso volontany.
Milanja: Lehilahy 45 - 60 pounds (20 - 27 kg) Vehivavy 35 - 50 pounds (16 - 22½ kg)
Ny fiampitana eo anelanelan'ny Husky Alaskan sy ny Husky Siberian dia antsoina hoe Huskies Alaskan Amerindian. Ity karazana Husky ity dia natomboka tamin'ny taona 1970.
Alaskan Husky (havia), Siberian Husky (ankavanana)
shetland mpiandry ondry australianina mpiandry ondry mifangaro
shar pei sy pug mix
pekingese pomeranian afangaro alika kely amidy